Ukudidiyela Ukumaketha Komhlaba Wonke Komkhiqizo Oyedwa emazweni angu-23 | Martech Zone
Ukudidiyela Ukumaketha Komhlaba Wonke Komkhiqizo Oyedwa emazweni angu-23
NgoMsombuluko, Januwari 9, 2017 UNate Holmes
Njengomkhiqizo womhlaba jikelele, awunayo global izilaleli. Izithameli zakho ziqukethe izethameli eziningi zesifunda nezasendaweni. Futhi ngaphakathi kwalezi zilaleli kunezindaba ezithile ezizobanjwa futhi zixoxwe. Lezo zindaba aziveli nje ngomlingo. Kufanele kube nesinyathelo sokuzitholela, ukusithatha, bese sabelana ngakho. Kuthatha ukuxhumana nokusebenzisana. Uma kwenzeka, kuyithuluzi elinamandla lokuxhuma umkhiqizo wakho kuzethameli zakho ezithile. Ngakho-ke usebenzisana kanjani namaqembu ahlanganisa amazwe angama-23, izilimi eziyisihlanu ezisemqoka, nezindawo zesikhathi eziyi-15?
Ukwakha uphawu lomhlaba jikelele oluhambisanayo: iqiniso ngedokhumenti yemikhombandlela yomkhiqizo wamakhasi angama-50
Imihlahlandlela yomkhiqizo ibalulekile ekugcineni umkhiqizo ongaguquguquki. Banikeza amaqembu akho ukuqonda ukuthi ngubani, yini, ngani, nokuthi kanjani ngalo mkhiqizo. Kepha idokhumenti enamakhasi angama-50 yamazinga womkhiqizo iyodwa ngeke ikhule ngomkhiqizo womhlaba wonke. Ucezu olulodwa kuphela oludinga ukubhangqwa nezindaba zamakhasimende nokuqukethwe ukuxoxa ngakho.
Ngabe usutshalile isikhathi nemali ebonakalayo kuhlelo lomkhiqizo lomhlaba wonke ukuze uthole amaqembu akho emhlabeni wonke engaphenduli? Imihlahlandlela emikhulu yomkhiqizo iyodwa ngeke ihlanganyele amaqembu emhlabeni wonke ngemuva kokukhipha owodwa. Noma inemithetho yonke futhi ibukeka yinhle, ayikaphili. Futhi nangomsebenzi omangalisayo owenzekayo, awukho umzamo wangempela owabelana ngawo wonke amazwe.
Umkhiqizo womhlaba wonke kufanele umakethe kuzethameli zendawo nezesifunda futhi uthembe amaqembu akho wokumaketha ukuthi ahambise imikhankaso yezokumaketha yasendaweni
Izithameli zakho okuqondiswe kuzo akuwona wonke umuntu. Azikho izilaleli ezihlangene “zomhlaba wonke” iqembu lakho elingagxila kuzo. Izithameli zakho ziqukethe izethameli eziningi zasendaweni. Lapho uzama ukumaketha kuwo wonke umuntu usebenzisa ulimi olufanayo nezithombe, ugcina ngokuthwebula izithombe ezithwetshulwayo okungekho noyedwa ophathelene nazo. Ukusetha ukunika amandla ithimba ngalinye lokumaketha emazweni angama-23 ukuthi lithathe futhi lihlanganyele lezo zindaba ngazinye, lezi zindaba zizoba yingqikithi yomkhiqizo omusha futhi othuthukisiwe.
Indaba yakho yomhlaba wonke yakhiwe yizindaba zasendaweni
Umkhiqizo womhlaba wonke awukwazi ukuba ngumgwaqo wendlela eyodwa ngaphandle kwendlunkulu. Ukuholwa nokuqondiswa okuvela endlunkulu kubalulekile, kepha isu lakho lomhlaba jikelele akufanele liziba inani lalabo abaseduze nezethameli umkhiqizo okhuluma nazo. Kudingeka kube nokushintshana kwemibono nokuqukethwe phakathi kwendlunkulu namaqembu emhlabeni wonke. Lokhu kunweba ukufinyelela komkhiqizo wakho futhi kunikeza amaqembu akho omhlaba wonke ubunikazi balo mkhiqizo.
Lolu hlobo lwefilosofi "yokuvumela ubuqambi" aluniki amandla amaqembu endawo kuphela kepha linikeza izindaba ezisezingeni nokuqukethwe kwamanye amaqembu ezifunda kanye nasekomkhulu lawo. Ngemibono eminingi nokwabelana ngokuqukethwe, umkhiqizo uba nobumbano futhi uphile ngokwengeziwe.
Ixhuma amaqembu wokumaketha emazweni angama-23
Lapho usebenza ezindaweni ezinesikhathi ezihlukene eziyi-15, awunakuthembela kumakholi ukuthi abe ukuphela kwendlela yokuxhumana, ikakhulukazi lapho usebenzisana nengqalasizinda yamazwe asathuthuka engaholela ekulahlekelweni izingcingo njalo. Ukusebenzisa imodeli yokuzisiza kunika amandla amaqembu ukufinyelela lokho abakudingayo, lapho bekudinga khona.
Amaqembu kufanele asethe i- ukuphathwa kwefa yedijithali (i-DAM) uhlelo. Uhlelo lwe-DAM luyindawo enembile, efinyeleleka lapho noma ngubani angafinyelela noma anikele kokuqukethwe. Kusiza ukwabelana ngezindaba nokuqukethwe. Ukwakha inani lalaba bakhangisi abasebenza kanzima kusize ekukhuliseni uhlelo ngokomzimba, lapho idokodo lomkhiqizo elizimele lawa phansi.
Uhlelo lwe-DAM lusebenza njengehabhu lokuqukethwe eliphakathi kwawo wonke amaqembu. Kubanika amandla okuxhuma nokuqapha okuqukethwe okuqukethe izindaba abazitholayo, futhi kunikeza obala kalula kulokho okwenziwa amanye amaqembu. Ukusebenzisa uhlelo lwe-DAM kunika amandla indlunkulu, amaqembu endawo, nabanye ukuthi basebenzisane - hhayi nje ukusebenza ngakunye.
Ukuphathwa kwempahla yedijithali kuxhuma kanjani emazweni angama-23
Ukuqasha umthwebuli zithombe wasendaweni ukuthwebula izindaba zamakhasimende, nokusebenzisa izithombe kumikhankaso yendawo yokumaketha. Kepha akugcini lapho. Izithombe zingalayishwa ohlelweni lwe-DAM futhi zibuyekezelwe ikhwalithi nemethadatha eyabelwe. Ngemuva kwalokho ziyatholakala ukuthi zisetshenziselwe ezinye izinkampani ezisizayo, imeyili eqondile evela eceleni, nasendlunkulu yemibiko yonyaka. Ukususa ukugxila ekunikezeni amandla amaqembu abo asezindaweni zokumaketha kusize ukusatshalaliswa kwemibono, ukuhambisa imikhankaso yezentengiso, nokwabelana ngezindaba zempumelelo.
Tags: ukuphathwa kwefaUkufaka uphawuIdamuukuphathwa kwempahla edijithaliglobalumkhiqizo womhlaba jikelelewandula
UNate Holmes ungumxhumanisi wokumaketha we Nweba Amabhizinisi kanye nalo I-Smartimage isandiso somkhiqizo. UNate unentshisekelo eqinile ekuphathweni komkhiqizo, ukumaketha okuqukethwe kanye nezibalo zokumaketha. UNate uyakujabulela ukusebenzisana nabantu bezizinda ezehlukene ekuhlelweni kwabo bonke osayizi, kusuka kumaqembu ezokumaketha ezentengiselwano emabhizinisini amakhulu kuya kothishanhloko bamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi.
Ukuthengisa Ku-Inthanethi: Ukuthola Izimbangela Zakho Zokuthenga Zamathemba